Dowladda Maraykan oo soo dhawaysay go’aankii iyo Golaha Shacabka iyo Madaxweyne Farmaajo – Kalfadhi
Dowladda Maraykan ayaa maanta soo dhoweysay go’aankii Madaxweyne Farmaajo iyo Golaha Shacabka ee dib ugu laabashada heshiiskii 17 September, iyadoona sidoo kale soo dhoweeysay in Ra’iisul Wasaare Rooble uu qaato hoggaaminta doorashada iyo amaanka doorashada.
“Majirto shuruudo dambe oo cidna laga aqbali doono, waa in doorasho la aaddo Dawladda Maraykanku waxay sida ugu dhakhsaha badan gacan uga gaysanaysaa taageerada doorashada” ayey hadalkeeda sii raacisay.
Golaha Shacabka Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa shalay cod aqlabiyad leh ku ansixiyay in dib loogu laabto heshiiskii doorasho ee 17 September, kaddib kulan aan caadi aheyn oo uu ka qeyb-galay madaxweyne Maxamed Cabdullahi Farmaajo.
Guddoomiyaha Golaha Shacabka Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, ayaa sheegay in 140 mudane ay aqbashay in dib loogu noqdo heshiiska, mana jirin mudane diiday ama ka aamusay.
Guddoomiyaha Golaha Shacabka iyo ergeyga gaarka ah ee dowladda Qatar oo kulan yeeshay